Mogadishu Journal » Edouard Mendy ayaa waxaa soo gaaray Dhaawac kulankii qaramada
Edouard Mendy ayaa waxaa soo gaaray Dhaawac kulankii qaramada
Goolhayaha Chelsea Edouard Mendy ayaa laga saaray xulka Senegal ka hor kulamada bishaan ay la ciyaarayaan Morocco iyo Mauritania ka dib dhaawac bowdada ah oo ka soo gaaray tababarka.
Chelsea ayaa haatan ka dhididsan dhibaatada daran waxayna taasi macnaheedu noqon karaa in dib loogu soo yeero lambar hore Kepa Arrizabalaga hadii Mendy uusan taam u aheyn waqtiga inuu wajaho Southampton marka kubada cagta gudaha ay dib u bilaabato 17ka Oktoobar.
Iyadoo tababare Frank Lampard uusan muddo dheer ku qanacsaneyn qaladka khaldan ee Kepa, ayaa hadana ah goolhayaha ugu qaalisan taariikhda at 71.6m, Chelsea ayaa ku bixisay 22 milyan oo ginni saxiixa Mendy oo ka yimid Rennes.
Heshiiska waxaa shaqsi ahaan u qaaday halyeeyga Stamford Bridge iyo lataliyaha Petr Cech, oo sidoo kale horey u ahaa ciyaaryahan Rennes ka hor inta uusan u wareegin galbeedka London 16 sano ka hor. Mendy ayaa kulankiisii ​​ugu horreeyay u saftay Chelsea ciyaartii ugu dambeysay ee Carabao Cup ee ay la ciyaareen Spurs dhammaadkii bishii la soo dhaafay, waxaana ku xigay qaanso uu u qaaday Premier League kulankii Crystal Pace ee isbuucii hore.
Warka ku saabsan dhaawiciisa isla markiiba ka dib markii uu la wareegay booska koowaad ayaa ku dhacaya dharbaaxo.
Xiriirka kubada cagta Senegal ayaa xaqiijiyay in 28 jirkaan uu soo gaaray dhaawac bowdada midig intii lagu jiray tababarkii Arbacada.
Markii dambe waxaa lagu qiimeeyay isbitaal ku yaal Rabat, halkaas oo Senegal ay isku diyaarineyso inay wajahdo Morocco, laakiin go’aanka ayaa hadda la gaadhay in Mendy uu ka baxo. Waxay noqon doontaa shaqaalaha caafimaadka ee Chelsea inay baaritaan dheeraad ah ku sameeyaan goolhayaha isla markaana ay qiimeeyaan nooca daaweynta iyo soo kabashada ee loo baahan yahay. Laakiin, illaa iyo inta macluumaad dheeri ah laga ogaanayo, waxay isaga shaki gelineysaa inuu wajaho Saints usbuuca soo socda, taasoo dib u dhigis u noqon doonta Kepa.
In kasta oo hoos loo riixay amarka xiisaha leh oo lala xiriirinayo inuu ka tagayo ka hor inta aan la gaarin xilliga ugu dambeeya ee suuqa kala iibsiga, oo hadda dhaaftay, Kepa lagama saarin kooxda, wuxuuna fadhiyey kursiga keydka isagoo ah labo lambar mid kasta oo ka mid ah labada kulan ee Mendy ciyaaray.
Musharax Madaxweyne Khayre oo caawa si weyn loogu soo dhaweeyay Nairobi (Daawo Sawirada)
Haweeney U Dhalatay Dalka Faransiiska Oo Afduub Ahaaan Loogu Heystay Dalka Mali Oo La Siidaayay